Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Salomon Rondon tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Gladiator". Ny Salomon Rondon Childhood Story miaraka amin'ny tantaram-piainana tsy fantatra. Zava-dehibe aminao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa olona afaka manaiky na manaiky ny faharetan'ny asa izy, ka nahatonga azy ho iray amin'ireo mpikatroka marary indrindra ny ligy voalohany. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Salomon Rondon izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Salomon Rondon Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fiainan'ny taloha sy ny fianakaviana
José Salomón Rondón Giménez dia teraka tamin'ny 16dio ny volana septambra 1989 ho an'ny reniny, Maitana Giménez (mpikarakara trano) ary rain'i José Rafael Rondón (mpampianatra simia) ao amin'ny sehatra malaza Catia, any Caracas, Venezoelà. Ity ambany ity ny sarin'ny ray aman-drenin'i Salomon Rondon.
Ny ray aman-drenin'i Salomon Rondon- MOTHER- Maitana Giménez sy RATSY-José Rafael Rondón (Credit to IG)
Ny nahaterahan'i Salomon Rondon dia notendrena araka ny filaharan'ny rainy izay nitantara ny tantaran'ny zanany lahy talohan'ny nahaterahany.
"Ny vadiko, fony bevohoka dia nanana kibo be. Tamin'izany fotoana izany dia mpankasitraka ny zaobaviko Diego Maradona noho ny World Cup 1986. Hitany fa isaky ny mahita lalao iray isika Maradona Nirotsaka an-tsitrapo tao an-kibon-dreniny i Solomona zazakely. Noho izany, nilaza ny anabaviko fa ho lasa mpilalao baolina kitra ny zanako lahy ary marina izany. Nahatsiaro i José Rafael Rondón.
Rondon dia teraka tamin'ny zanany lahimatoa tamin'ny ray aman-dreniny tao amin'ny fianakaviany tao an-tranony. Niara-nihaona tamin'ireo rahalahiny, Gerardo izay telo taona ny zokiny lahy sy ny zanany lahy rahalahiny Onlymai izay 3 taona ny zandriny.
Salomon Rondon Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Career aloha
Salomon Rondon dia nanomboka niaina ny fiainany tany am-piandohana, toy ny mandeha, mandoaka ary matory amin'ny baolina isan'alina. Ny fandraisany anjara tamin'ny baolina kitra no nitarika azy hiala tamin'ireo safidy ratsy izay azony natao fony kely.
"Hatramin'ny nahaterahako dia nandeha niaraka tamin'ny baolina aho ary nandoko ny zava-drehetra. Efa-taona aho no nanomboka nilalao tao amin'ny sekoliko. "
Nandritra ny vanim-potoanan'ny 4, dia nanaiky ny sampy i Rondon Rivaldo ary Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Ny fanapahan-kevitra hilalao baolina any an-tsekoly dia tonga indray andro iray raha nitady ny tolo-kevitry ny reniny, Maatin ny mpampianatra an'i Rondon mba hamela ny zanany lahy hilalao baolina amin'ny kianja maloto. Nanaiky izy ary nanomboka nilalao baolina kitra nandritra ny andro i Rondon. Ny fahombiazany tamin'ny fanatanjahan-tena voalohany dia tonga tamin'ny lalao tamin'ny lalao fifaninanana izay nahazoany ny trophy voalohany.
Rondon First Sporting Success-Credit amin'ny clubGulima
Na dia taorian'ny fiverenana tany am-pianarana aza dia mbola nilaina ny baolina kitra. Izany dia nahatonga azy hisoratra anarana tao amin'ny klioban'ny tanora ao an-toerana, San José de Calasanz izay nanome azy fahafahana hilalao baolina amin'ny hariva. Nampiasa ny baolina kitra i Rondon ho toy ny asa fanampiny ho an'ny fianarana, izay nidina teo ambany fanaraha-mason'ny ray aman-dreniny izay nahatonga ny fahazarana hitazonana sary an-tsary ny fahatsiarovana ny zanany voalohany.
Ny dadan'i Salomon Rondon dia manambara ny fiainan'ny zanany voalohany tany amin'ny album-Credit ho an'ny Cronica.
Ny fientanam-pon'i Salomon Rondon ho an'ny baolina kitra koa dia tsapa, indraindray tsy maninona ao an-tranon-dry zareo. Fotoanan'ny fotoana i Rondon ary i Gerardo rahalahiny dia tia mandondòna ny varavarankeliny, ny fitoeran-dabozia ary ny vazy.
Salomon Rondon no nanapaka ny varavarankeliny tamin'ny baolina baolina toy ny Kid (Credit to PixaBay)
Noraisiny tamin'ny maman-dry Raman fa tsy maintsy mandoa ny lanjany izy rehefa manangona vola be avy amin'ny ray aman-dreniny.
Manao fanapahan-kevitra lehibe:
Rondon no nanapa-kevitra lehibe indrindra fony izy tao amin'ny taona faharoa naha-lisea an'i Calasanz. Nifanandrina tamin'i Rafael dadany izy mba hanana izay heveriny ho resaka matotra amin'ny mpampianatra simia.
"Nolazainy tamiko fa handao ny sekoly izy hilalao baolina," Nahatsiaro ny rainy.
Salomon Rondon dia nanapa-kevitra tamin'ny farany ny fanapahan-kevitra tsy hay lazaina ny handao ny fanabeazana any amin'ny oniversite ary hanao ny tenany manontolo amin'ny baolina kitra. Ny fanapahan-keviny dia nanaraka azy niditra tao amin'ny lisitry ny klioban'ny klioban'ny Deportivo Gulima taorian'ny fitsapana nahomby.
Salomon Rondon Deportivo Gulima ID Card (Credit ho ClubGulima)
Salomon Rondon Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Raha tao Deportivo Gulima, Salomon Rondon dia nibanjina an'i Eoropa. Mba hanohy izany dia nanapa-kevitra ny hanohy ny fizotry ny fizotry ny baolina kitra izy ao Aragua, klioba Columbiana izay malaza ho mpilalao baolina any Eoropa. Rondon dia niteraka fiantraikany teo akaiky teo tao Aragua izay nanjary lohahevitra lehibe tamin'ny media media.
Ny làlan'i Salomon Rondon ho fanomezam-boninahitra (Credit to CumpleañosdeFamosos)
Ny fahombiazana tsy tapaka no nahatonga azy ho lasa mpilalao ao amin'ny ekipa ambony ao amin'ny klioba raha vantany vao tafiditra ny laharam-pahamehany. Rondon tamin'ny taona 17 dia nanao ny lahateniny voalohany tao amin'ny Venezoeliana Primera División. Tsy ela talohan'ny nanoratana azy ho ilay mpanafika tsara indrindra ao amin'ny fireneny.
Ny fahombiazan'i Salomon Rondon an'i Aragua (Credit to AS)
Tamin'io taona io dia nanjary zava-misy marina i Rondon Dream Dream mba hilalao an'i Eoropa taorian'ny nahasamborana azy UD Las Palmas any Espaina. Niresaka momba izany fotoam-pihetseham-po tamin'ny fialana an-trano izany i Rondon indray andro ...
"Ny nandao ny fianakaviako tany Eoropa dia zavatra faran'izay sarotra indrindra. Ny tenim-pitenenako farany ho ahy dia ny 'Mandehana!' Nitomany ny reniko rehefa nilaza izany izy. Nitomany ihany koa aho. Izaho dia 19 fotsiny tamin'io fotoana io. Tsy nahalala na inona na inona aho - tsy nahalala ny fomba handrahoako ... izaho dia teo amin'ny Skype niteny hoe: 'Mama, ahoana no ahafahako manamboara ny pasta ?!' Toy izao ny renibeko: 'Atsipazo ao anaty vilany ary ...!' "
Tany Eoropa, nandroso i Rondon ary nahita ny tenany nilalao an'i Malaga. Tsy nanam-potoana firy hiara-hiasa amin'ny klioba izy. Fantatrao ve?… Raha tany Malaga, dia nisy fiaramanidina matihanina manana lozam-pifamoivoizana nipoitra Ruud van Nistelrooy nanohana azy ary nanery azy hisotro ronono.
Salomon Rondon mitsangatsangana (Credit to TalkSports sy 20Minutos)
Salomon Rondon dia tohanan'ny maherifo taorian'ny nandravana an'i Ruud van Nistelrooy. Noho ny endriny dia ambony noho ny tatitra momba ny tanjon'ny LaLiga nosoratan'ny mpilalao baolina Venezoelana teo aloha izy Juan Arango. Ny "Mpamonjy an'i Malaga"Na ny niantsoana azy dia nahatsikaritra fa nanampy ny fialan-tsasatry ny klioba espaniola.
Salomon Rondon dia lasa Mpamonjy an'i Malaga (Credit to Instagram)
Ny zafikelin'i Salomon Rondon dia iray amin'ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ny mason'ny vahoaka, satria ny fiainam-pitiavany dia tsy misy fepetra. Ao ambadiky ny Venezoeliana mahomby dia misy vehivavy mahafinaritra sy zaza mahafinaritra.
Salomon Rondon sy ny zanaka (Credit to Salomon Rondon's Instagram)
Salomon Rondon toy ny tamin'ny fotoana nanoratana ny fiainana ao Newcastle izay inoany fa "tanàna lehibe"Ho an'ny fianakaviany. "Ny vadiko, ny zanako roa, ny rafozan-dreniko, ny renibeny ny vadiko dia manana ny fianakaviako manodidina ahy aho" hoy Rondón,
Salomon Rondon Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana manokana
Ny fahazoana mahafantatra an'i Life Salomon Rondon dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Manomboka eo izy dia olona manana fomba fijery metodista izay manome antoka fa mametraka ny fanapahan-kevitra hikatsaka fahasambarana mihoatra ny zava-drehetra izy.
Lavidavitra ny fandresen-dahatra ny tanjona eo amin'ny sehatra i Salomon Rondon dia mandany fotoana sarobidy amin'ny asany mpanao ady totohondry izay inoany fa mampitombo ny hery ambony kokoa. Ity ambany ity ny lahatsary misy fiasana toy izany.
Rondon dia mino ny ady totohondry ho toy ny fanatanjahantena ho an'ny fiarovan-tena. Ao amin'ny lahatsary eto ambany, afaka mametraka bokotra amin'ny bokotra izy amin'ny fampianarany ny zanany ny fomba hiarovany ny tenany ary tsy ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena ho fitaovana hitadiavana olana.
Lavidavitra ny St James 'Park, milalao ny zanany sy ny ady totohondry, i Rondon dia mahafaly ny mandeha miaraka amin'ny alikany.
Salomon Rondon sy ny alikany (Credit to The Mirror).
Salomon Rondon Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny maha-mpilalao baolina kitra malaza indrindra ho an'ny fireneny sy ny solontenan'ny Premier League dia azo antoka fa ny fianakavian'i Salomon Rondon sy ny vahoakany rehetra dia mirehareha aminy. Ny ray aman-drenin'ireo rahalahiny sy rahalahin'i Salomon Rondon dia mijanona ao Caracas, Venezoela izay tamin'ny fotoana nanoratana. Firenena iray izay tsy ara-politika izy noho ny olana ara-toekarena sy ara-politika efa ela.
Ny fanjakan'i Salomon Rondon amin'ny korontana (Credit to NBC News sy Khilafah)
Miaraka amin'ny fiparitahan'ny fialantsasatra, mihatra amin'ny heloka bevava ny heloka bevava ary ny tahan'ny vono olona any Venezuela. Raha niresaka momba ny loza aterak'ireo mpaka an-keriny i Rondon dia niteny indray mandeha;
"Vitsy ny olona mahafantatra hoe iza no fianakaviako ary miezaka araka izay tratra aho fa tsy miaraka amiko ry zareo - tsy amin'ny any Venezoela. Raha miaraka amin'izy ireo aho, dia ao an-trano foana. Tsy miara-mivoaka mihitsy izahay mba tsy hisarika ny saina. Miezaka ny tsy hisarika ny saiko mihitsy aho rehefa eo aho. "
Na dia eo aza ny olana ara-piarovana, tsy saro-dalana i Rondon haka sary miaraka amin'ny ray aman-dreniny indrindra ilay dadany mahafinaritra izay avy amin'ny mpampianatra simia iray taty aoriana dia lasa profesora simia tao amin'ny sekolim-panjakana miaramila ao Venezoela.
Salomon Rondon miala amin'ny rainy (Credit to Instagram)
Momba ny Gladiatory anarany:
Araka ny Mirror, Salomon Rondon dia nanambara indray mandeha fa tiany ny antsoina amin'ny anaram-bosiny ... "Ny biby. "Nandritra ny fotoanany tao Malaga. Rehefa niditra tao Newcastle dia nanomboka niantso azy ny mpankafy "Gladiator"Izay anarana izay tiany indrindra.
"Tiako ilay gladiatery anaram-bosotra '. Izany no miezaka ny ho eo amin'ny sehatra. Manokatra ny sandriko aho, mijery lehibe, ento ny vatako ary esory amin'ny baoliko ny ekipako. "
Taorian'ny nandefasana lahatsary Gladiator Skills, nanapa-kevitra i Rondon fa hampivelatra ny mpankafy azy amin'ny loka iray amin'ny fangatahana izy ireo mandefa horonan-tsary momba ny tifitra tsara indrindra sy ny tricks amin'ny zavatra rehetra tsy ampiasaina amin'ny tenifototra #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator. Ity ambany ity ny Video Gladiator an'i Salomon Rondon.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Salomon Rondon momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary West Bromwich Albion Football Diary
Sean Longstaff Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny tantaram-pitiavan'i Aleksandar Mitrovic momba ny tantaram-pianakaviana tetsy amin'ny tantara tsy fantatra
Moussa Sissoko Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Tombokely Tsiambaratelo
Jamala Lascelles Feno tantaram-pitiavana ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza